विवाह पूर्व शारीरिक सम्पर्क राखेकै कारण युवकलाई दिइयो यस्तो गम्भिर सजाय
विवाहपूर्वको यौन सम्पर्कलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
विवाह पूर्वको यौनसम्पर्कका कारण एक युवकले निकै खतरनाक सजाय भोग्नुपरेको छ ।
यो घटना इन्डोनेशियाको हो । त्यहाँको एक युवकले आइतवार विवाह पूर्व यौन सम्पर्क गरेको भन्दै सजाए पाएका छन् । ती युवकलाई डोरीले हिर्काइएको छ । डोरीले हिर्काउँदा पटक पटक बेहोस भएका उनलाई होस खुलेपछि पुनः डोरीले नै हिर्काइएको छ ।
गम्भिर घाइते बनेका उनको अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको एजेन्सीले बताएको छ ।
अहिले सन्सारभर उनलाई यस्तो सजाय दिएकोमा आलोचना भइरहेको छ । इस्लामिक कानुनअनुसार इन्डोनेसियामा कानूनले प्रतिबन्धित गरेका कार्यका लागि यस्तै सजाय दिइने बताइएको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा बढी मुस्लिम रहेको देश इन्डोनेशियामा धार्मिक कानून लागू भएको छ । आइतवार २२ वर्षीय मानिसलाई १०० पटक डोरीले हिर्काइएको थियो । युवकले एक महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध राखेका थिए । त्इसकारण उनलाई यति ठूलो सजाय दिइएको हो ।
मरेका मानिसलाई ‘उज्ज्वल भविष्यको कामना’ !
नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेका बेला एउटै मञ्चमा शीर्ष नेता : ओलीको बायाँ प्रचण्ड, दायाँ माधव नेपाल
प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियोमार्फत सम्झिए पूर्व मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीलाई
सडक दुर्घटनामा मालेका महासचिव सीपी मैनाली घाइते
रक्षामन्त्री पोखरेललाई जनार्दन शर्माको चुनौती : मलाई तर्साउन खोजिएको हो ?
सत्तामा बसेर सत्ताकै दुरुपयोग गरियो - अष्टलक्ष्मी शाक्य
चीनबाहिर व्यापक रूपमा फैलिँदै कोरोनाभाइरस